Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: toy ny akohokely lasan’ny papango… | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: toy ny akohokely lasan’ny papango…
Tsy niandry ela, ny ampitso dia nirefotra toy ny vara-datsaka ny valin-taratasy avy any amin’ny minisitry ny fitsarana : fampiatona vonjy maika an’i Faniry Erinaivo eo amin’ny asa maha mpitsara an’ity vehivavy nilatsaka amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Nanaitra ihany ny akingan’ny tompon’andraikitra tamin’ny fandraisana an’izany fanapahana izany. Afaka heverina anefa fa ny fifampandanjana ny valiny amin’ny herisetra heno tao anatin’ny fanambaran’i Faniry Erinaivo no nitarika ny tompon’andraikitra haka fepetra sady haingana no entitra. Niteraka savorivory teo amin’ny fiarahamonina ny lahateny mahery vaika nanameloka ny mpitandro filaminana eo amin’ny fanatanterahany ny andraikitra ankinina aminy. Na mety hisy marina aza ny voalazan’i Faniry Erinaivo tafahoatra tsy ampy fifanajana ny fomba filazany azy. Ny mpanao pôlitika moa dia tsy hita atao ho mpitsara ny disadisa toy izany, ny tranga kianiny androany mety ho eloka hefainy rahampitso.
Nahatsiaro ho voahosihosy ny zony amin’ny maha olom-pirenena sy maha olombelona azy angamba ity mpilatsaka ho fidiny ity raha voatositosiky ny mpitandro filaminana tsy nohon’ny rariny. Tsy nisy seho afaka nihiahiana hitarika korontana tokoa moa teo amin’ilay toerana nanaovan’ireo mpilatsaka mitaky fanemorana ny fifidianana hetsika fanentanana momban’izany. Tsara ny fahatsapan’ny olona milatsaka ho fidina fa tsy misy ny rariny afaka ianteherana, izany ny zakain’ny mponina isan’andro, tsy hita ho adino koa fa ny iraka sy asa fifampivezivezena ny mpitandro filaminana, na hazakazaka toy ny fanenjehana lambo izany na fijorona mijajirika maharitra toy ny labozia miandry ampiretina, amin’ny maha olombelona dia mety ampiaka-pofina sy ahamaimbo ra. Ambon’izany efa misambaodika avokoa moa ny rafitra repoblikana eto an-toerana. Araky ny fenitry ny mpitsara ao amin’ny Parquet no mifehy ny fitandrovana ny filaminana ao amin’ny faritra iadidiny, tsy izany anefa ny fandaminana miseho, ny fitondrana tsy matoky tena sady andaniny manambitamby ny hery famoretana ankilany mampiasa fahefana ahafahany migeja ny fitsarana.
Atao ahoana Ramatoakely, avo fanidina ity vao tra-pahorina, tsy hita adinoina fa arakaraky ny fisondrotana toerana no ilana fitandremana sy fifehezan-tena, tendron-kazo no alan-drivotra. Na ny fitenitenenam-poana aza manana fenitra, famafazana lainga izay fantatra mampidi-doza ho an’ny maro aza no mbola azo heverina fa mety tsy ampidi-kizo an’ny tena nohon’ny fanambarana ny marina.